ZCTU Yoenderera Mberi neKucherechedza Zuva reKushungurudzwa neMapurisa?
Munyori mukuru weZCTU, VaJaphet Moyo
Mapurisa emuHarare arambidza nhengo dzesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, mvumo yekuungana muHarare neMugovera kuti dzicherechedze zuva rekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa, rePolice Brutality Day.
Munyori mukuru weZCTU, VaJaphet Moyo, vanoti vakanga vanyorera mapurisa vachiazivisa nezvehurongwa hwekurangarira zuva iri kuburikidza nekutsvaira panokwirirwa mabhazi paCharge Office, mushure vachizofora vakananga kumahofisi avo apo vaizonoungana.
Asi mapurisa anonzi azivisa sangano iri kuti hurongwa hwavo uhwu hahuneyi nenyaya dzevashandi, nekudaro akakurudzira ZCTU kuti itevedzere zvikamu 23 (1) (a) ne (b) ne25 zvemutemo wePublic Order and Security Act.
Asi VaMoyo vanoti vachaenderera mberi nehurongwa hwavo hwekuungana muHarare zvisineyi nemhinduro yavawana kubva kumapurisa iyi.
VaMoyo vanoti vakatanga kucherechedza zuva rekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa iri mushure mekusungwa, kurohwa pamwe nekutochwa kwenhengo dzeZCTU dzaidarika zana musi wa 13 Gunyana 2006 dzakanga dzaratidzira dzichinyunyuta nekuparara kweupfumi hwenyika.